Priyanka Chopra oo Bollywood ku eedeysay inuu qiimeeyo dumarka midabka casaanka ah leh.
Priyanka Chopra ayaa sheegtay in Bollywood ay ku aragtay arrin aysan ka helin taasoo ah in ay shirkada bollywood kala jeceshahay midabka gabadhaha jilayo aflaamta ayagoo xusha midabka casaanka ah iyadoo ay Priyanka ku tilmaamtay arrinkaasi arrin laga tagay oo aad u xun oo ay haboontahay in laga ilba...
Serena Williams oo faraantiga guurka loo galiyay , waakuma ninka ay calfatay?
Cayaaryahanadda teeniska ee horyaalka ka ah dunida Serena Williams ayaa shaaciyasya in ay alkun, faraantiga guurka ama fargashi gashatay iyadoo isku diyaarineysa aroos. Serena ayaa waxaa ay ilaa sanadkii hore wada socdeen wada Socdeen Alexis Ohanian oo ah ninka aas aasay bogga caanka ah e...
Drake iyo Jennifer Lopez oo xaqiijiyay in ay lamaane isjecel noqdeen.
Heesaaga Drake ayaa maalmahaan jaceyl iyo shukaansi kula jira fanaanada Jennifer Lopez ayagoo soo dhigaayay baraha internetka sawiro ay wada qaadanayaan waqti roomaansi ah iyo jawi dagan oo baashaal ah. Drake oo 30 jir ah ayaa la sheegayaa inuu fanaanada Jennifer Lopez , J LO oo 47 jir ah si oo...
Kareena Kapoor oo wiil u dhashay Saif Ali Khan.
Daawo Farxiya Kabayare oo Nairobi ku qabatay showgii ugu weynaa fankeeda. hees cusubna ka qaadday.
Blac Chyna iyo Rob Kardashian oo kala haray.
Sida ay qoreen wargeysada caalamiga ah waxa kala haray Blac Chyna iyo Rob Kardashian oo ah wiilka reer Kardashian oo ay mudo wada socdeen ayna dhawaan u dhashay gabar yar. Rob iyo Chyna ayaa iyago is mehersaday dhawan waxaana uu yimid kala heritaankooda kadib markii la xaday bogii instagramka e...
Jilaaga Ranveer Singh oo filimadiisa noqdeen kuwa ugu qaalisan Bollywood
Jilaaga Ranveer Singh ayaa waxaa uu noqday jilaaga haatan sanadkan ugu shidan Bollywood isagoo filimadiisa ay noqdeen kuwa ugu dhaqaalaha badan soo galiya. Ranveer Singh oo sanadkii tagay qaatay abaalmarinta jilaaga sanadka ayaa waxaa filimkiisa Befikre uu sii sara dhaafay inuu soo xareeyo dhaq...
Shilpa Shetty: Aniga ma ihi ganacsato , waxaan ahay Jilaa.
Atriishada caanka ah ee Bollywood ee Shilpa Shetty ayaa taageerayasheeda u xaqiijisay in aysan marnaba dooneyn in ay u arkaan in ay tahay qof ganacsanato ah balse ay u arkaan in ay tahay uun Jilaa ama atriisho. Arrinkaan ayaa soo baxay kadib markii ay saxaafada ay daba dhigatay Shilpa oo la she...
Rani Mukerjee oo shaacisay sawirka gabadheeda sheegtayna in hooyanimada ay bedeshay nolosheeda.
Atriishada Bollywood Rani Mukharjee ayaa waxey shaacisay sawirka gabadheeda yar ee Adira oo aanan hore wali loo arkin. Rani oo ay ka muuqatay hooyanimo ayaa soo dhigtay sidoo kale qoraal ay kaga hadlayso sida ay gabadheeda u bedeshahay nolosheeda iyadoo sheegtay in ay noqotay qof naxariis badan, sam...
Madaxweynahii Gambia oo ka noqday inuu aqbalay natiijada doorashada dalkiisa
Yahye Jammeh oo ah madaxweynaha 22 sano soo xukumayay dalka galbeedka Afrika ee Gambia oo doorasho madaxnimada looga adkaaday bishaan desember koowdeeda taasoo uu aqbalay una hambalyeeyay murashaxii ka guuleystay ee Adama Barrow , horena u sheegay inuu xilka ku wareejinay ayaa waxuu haatan ka noqday...
Kim Kardashian oo go'aansatay ay iska furto Kanye West.
Kim Kardashian ayaa waxey dooneysaa in ay iska furto ninkeeda heesaaga Kanye West oo maalmahan isbitaal ku jira xanuuno madaxa la xeriira dartiis oo dhaliyay xaalad ka dhex ooganta taasoo ay sabab u dhigtay maadama uu Kanye noqday qof aan maskax ahaan fiyoobeeyn in ay dooneyso in ay iska furto...
Waxaan ahay wiilka Bill Clinton ; Wiil sheegtay inuu yahay wiilka Clinton oo lagu inkiray hooyadiis.
Wiil lagu magacaabo Danney Williams oo 30 jir ah ayaa sheegtay inuu yahay wiilka maaxweynahii hore ee Mareykanka Bill Clinton balse aan la aqoon. Wiilkaan ayaa yiri aabahey waa Clinton imana ogsoona , asigoo sheegay in uu ku dhashay si kedis ah kadib markii hooyadiis ay la seexatay...
Rihanna iyo Prince Harry oo iska baaray cudurka AIDS ka, waa Maxaay sababta ?
Amiirka dalka Ingiriiska Prince Harry iyo fanaanada Rihanna ee kasoo jeeda jasiirada Barbados oo ka qeybgalyay munaasabada dabaal dagga 50-aad ee xorminada dalkaasi ayaa waxey halkaasi ka sameeyeen wacyi gelin maadaama ay ku beegneed maalinta AIDSka aduunka ee 1da desember waxeyna dadka u muujiyeen...
The Weeknd ku gacan seyray gacalisadiisii Bella Hadid.
Fanaanka caanka ah ee Canada kana soo jeeda Ethiopia ee Abel Tesfaye oo loo yaqaan The Weeknd ayaa ku gacanseyray inuu xeriir lasii wado gacalisadiisii da'da yareyd ee bella Hadid oo ay wada socdeen muddo sanad ku dhaw, taasoo ugu dambeyn ay kala hareen. Bella Hadid oo 20 jir ah ayaa...
Muna Kay oo noqotay xildhibaan Baarlamaanka ah iyadoo laga soo doortay Koonfur galbeed Soomaaliya.
Gabadha Soomaalida ah ee caanka ka ah Social media ee dharka fashion ka naqshadeysa iibgeysana ee Muna Khalif , Muna Kay loo yaqaan ayaa ka mid noqotay xubnaha baarlamaanka ama aqalka hoose ee Soomaaliya ee dowladda dhawaan la dhisi doono. Muna Kay oo ka timid Mareykanka ayaa waxaa laga soo doo...